BitCAD barbardhigo - AutoCAD (Round 1) - egeomates
Isbarbardhiga BitCAD - AutoCAD (Round 1)
Febraayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD
Waxaan horey uga hadalnay BitCAD, taas oo ah a beddelka dhaqaalaha ilaa AutoCAD, oo leh xayeeysiin aad u xoog badan iyo in hadda xaqiiqda ah uu sii daayay 6.5 heeshiisyada 3D.
Maalin kasta shirkado badan ayaa lagu khasbay in ay ka tagaan dhaqanka jabsiga sababtoo ah heshiisyada caalamiga ah waxay helayaan dowlado badan oo ku lug leh ilaalinta xuquuqda daabacaadda, iyo sidoo kale xarumaha gaarka loo leeyahay ee ilaaliya fulinta.
Waxaan ogsoonahay in codsiyadani aysan waligood gaarin kartida buuxda ee AutoCAD ama Microstation, laakiin waxaan aaminsanahay in fursadahaasi ay tahay in la hormariyo maxaa yeelay waxay si buuxda u shaqeynayaan; Anigu waxaan ku qanacsanahay arrintan waxaan go'aansaday in aan furo qayb cusub oo ka hooseysa lineka IntelliCAD. Dib-u-eeggan, waxaan sameynayaa isbarbardhig udhexeeya AutoCAD 2008 iyo BitCAD, marka la eego dhismaha xogta, iyada oo xoogga la saarayo helitaanka amarrada.
Barta dhismaha ee xogta
Sawirka sare ayaa ka dhigan isbarbardhiga barbarashada dhexmarta AutoCAD 2008 iyo BitCAD 6.5. Amarradani way isku mid yihiin, kala duwanaanshaha qaarkood; ee dhexda u dhexeeya labada menus ayaan ku dhigay isku mid ah. BitCAD kooxo line iyo xline hal icon ah, sidoo kale xuduudaha amarka daweynta
Maxaa ka badan AutoCAD?: Amarka xayiraadda, in BitCAD kaliya uu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu galiyo, si loo abuuro aad u leedahay inaad tagto menu Tools, sidoo kale taliska gobolka ee ku jira menu Mqaybi.
Sida cad AutoCAD waxay leedahay more, iyo in BitCAD: Cloud iyo Jumada uma muuqdaan inay jiraan.
Maxaa badan oo ka mid ah BitCAD: Dammaanada, wipeout iyo mtext amarrada si ay ugu hawlgalaan AutoCAD waa inay tagaan menu Isku Aadka
Sida muuqata, amarrada xawilaadda iyo diyaaradda ee aan ku jirin AutoCAD, kan dambe wuxuu u eg yahay mid adag, laakiin BitCAD waxay leedahay mid adag oo ku jirta menu 3D.
Amarada la isku daro
Mid ka mid ah sifooyinka ugu wanaagsan ee BitCAD leeyahay waa in amarrada miiska this horey u keeno fursadaha kale, sidaas ka soo amar aad muujin kartaa fursadaha suurtogalka ah. Aad isku midka ah u shaqeynta Microstation. Iyadoo AutoCAD waxaad sidoo kale dhisi kartaa muraayadahan hoos loo dhigo, laakiin BitCAD horeyba waxay u keentaa waayeel.
Sidan, bararka 18 wuxuu leeyahay badhanka 32 dheeraad ah, sidaas darteed wuxuu noqonayaa amarrada 50. Ma aha in amarrada aysan ku jirin AutoCAD, laakiin waxay u baahan yihiin talaabo lagama maarmaan ah si ay udhaqaaqaan badiilkaas, guud ahaan waxay ku dhaqmayaan amarka kadibna badhanka midigta.
Xaqiiqdii aad u guulaysatay, habkan ayaa ah ikhtiyaarka labaad ee talada laga heli karo guji ugu horeeya.
Miisaaniyada Sharciga ah
Marka lagu daro, marka amarka la hawlgalo, xulashada saddexaad ee amarka, oo loo yaqaan 'menu menu', ayaa la helayaa adigoo gujinaya. Sidoo kale, shaqadan waxaa laga qaadaa Microstation, iyada oo ujeedadu tahay in la heli karo marka la riixo, marka amarka dhammeysto guddiga ayaa baaba'aya.
Marka laga hadlayo AutoCAD, waxay u baahan tahay hal tallaabo oo dheeraad ah, oo leh badhanka midigta midig si ay u awoodaan inay arkaan ikhtiyaaraadka xaalka. Labadaba waxay muujinayaan doorashooyinka xariiqa taliska si ay u isticmaalaan kumbuyuutarka.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in AutoCAD ee ku jira qeybahaas ay ku soo koobeen khadka xagjirsan ee u dhow halyeeyga; Si kastaba ha ahaatee, xalka BitCAD ayaa u muuqata mid ku habboon in laga fogaado isticmaalka kumbiyuutarka ama badhanka midigta.
Muuqaalkan ayaa sidoo kale fududeynaya hawlgalka iyo isku-dar ah amarrada, si loo siiyo tusaalahan aasaasiga ah:
Taliska xariiqa, AutoCAD kaliya waxay u adeegtaa si ay u sameeyaan xariiqyo, sugitaanka riixitaanka dhibcaha asalka / jagada ama amarka ku jira kumbuyuutarka; halka BitCAD menu macnaha ay kala dooran karto:
Xagasha, oo aad ku kaydsan tahay inaad ku qorto dhibka @
Raac adoo raacaya amarka lenghen lenghen, oo u oggolaanaya in uu sii wado jihada isku midka ah ee xariiqii hore
Ballan, oo aad ku geli karto masaafada aad codsatay amarka lenghen
Dib-u-noqosho / dib-u-furid, kuwani waxay u baahan yihiin isticmaalka kumbiyuutarka ama badhanka midig
Marka laga eego dhibicda sadexaad, shaqeynta Xirmada waxaa loo adeegsadaa, si loo xiro dhibicda ugu horeysa ee la tilmaamey, iyada oo aan la helin.
Hirgelinta amarrada qoraalka
Halkan amarrada waxay isla shaqeeyaan labada barnaamijba, xitaa amarro isku mid ah iyo gaaban-yar ayaa la aqoonsan yahay.
Dhab ahaantii dhismaha xogta BitCAD waa ku ool ah, sababtoo ah waxay u baahan tahay tallaabooyin yar. Waxaa cad in dadka isticmaala AutoCAD ay u bartaan dhaqanka ee isku keyboard ah, mouse, iyo fure ESC ah, laakiin haddii la soo maray labada barnaamijyada ay isku dayaan, shaqo la mid ah u samayn, waxa uu noqon lahaa mid xiiso leh in la ogaado inta orod yar amarrada in isticmaalayso BitCAD. In waqti, waana isku mid noqon karaa, laakiin qaab cad in dadaalka cerebral mid ka badan daal, gaar ahaan haddii ay ahaayeen shan sawirka saacadaha shaqada 8 toddobaad 4 shaqada ka dib rumaysataan inuu jiro qaab ciyaareed wanaagsan oo kuwii maskaxda yar cokan.
Dhammaadka wareegga kowaad this, BitCAD ku guuleystay dagaalkii ay kula% miisaaniyadda kaliya 10, in post kale sii wadi doontaa in ay arkaan isaga mid kale, sababtoo ah waxaan qabaa kale laysku halayn karo shirkad in uu aaminsan yahay in AutoCAD ma gaadho ee dhammaan hawlwadeenada iyo taas oo qaadatay waddada saxda ah ee aan la jabin.
The version BitCAD 6.5 ka mid ah 3D, wax ka yar qiimaha 400 Euros, haddii shirkad iibsaday computer ah $ 700 ama in ka badan, waxaan qabaa waa inay awoodaan inay iibsadaan mid ka mid ah liisamadaas. Dhab ahaantii, dad badan oo aan isticmaalin BitCAD sababtoo ah ma uusan ogeyn, inkasta oo version 30 uu si buuxda u shaqeynayo si uu u tijaabiyo.
Este ma aha boosto maalgalin ah
Post Previous«Previous Sida loo cabbiro waddada Google Earth 5.0
Post Next Maqnaanshaha blogda ma laha wax ka badan 500.Next »
Jawaabay in 5 "Isbarbar BitCAD - AutoCAD (Round 1)"
Oktoobar, 2014 at
Waa hagaag, barnaamijkani wuxuu ku yaalaa internetka, waa la qiimeyn karaa, waa wax fiican, laakiin xaggee laga iibsadaa maanta 2014?, Sida muuqata shirkaddu waxay ku kacday lacag. dhammaan isku xirnooyinka ganacsiga waa la jebiyey.
Oktoobar, 2011 at
Pline waxay ku weydiineysaa inaad sheegto qodobada, kuwaas oo noqon kara mid si toos ah u riixaya shaashadda ama galaya isku-duwaha foomka x, iyo
Markaas amarka hoos fursadaha muujiyay sida Close (xiro polyline ah), Fit (qalooca siman by geesaha), Spline (qalooca siman dhibcood dhexe), Decurve (resetting geesaha qalooca), biir (Ururi khadadka oo isku xiga ), Wareeg (Ka dhig dhumucda line line)
talia Chavez albites isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2011 at
Faa'iido ayaad iigu sheegi kartaa waxa shuruudaha xogta ee amarka daweynta
Carlos Berroterán isagu wuxuu leeyahay:
Hagaag, shaqaalahayga ayaa faallooyinkaas aniga igu siiya: «iyada oo la adeegsanayo intellicad-kan mid la mid ah wuxuu sameyn karaa isla waxa la mid ah autocad, dhammaan sawirrada dhismeyaasha guryaha ayaa la samayn karaa iyadoon la dareemin kala duwanaansho weyn…… Waxaan raacinayaa: si fiican, illaa aan ka hadalno qiimaha.
Inkastoo aanan waligay helin liisanka mid ka mid ah IntelliCADs ee suuqa, waxaan mar horeba isku dayay dhowr ka mid ah (ku dhowaad dhammaantood waxay leeyihiin nooc tijaabo ah oo ay si toos ah ugu siiyaan goobta). Waxaan ka soo baxay xiisaha iyo waxaan dareensanahay in aan waligeed awood u laheyn barnaamijka sida AutoCAD ay horay ugu sii fiicnaadeen si ay u noqdaan qalab si loo tixgeliyo. Waxaa muhiim ah in aanay clones of AutoCAD 100%, xataa iyada oo ujeedadu tahay (si ay u dhihi) si ay ugu eg, waxay leeyihiin sifooyin u gaar ah in loo sameeyo mid ka mid dareento mararka qaarkood ka badan (ama ka yar) raaxo leh oo iyaga la jira. Haddii ay igu xiran tahay waqtigaan si aan u doorto xafiiska waan la shaqeynayaa, si kalsooni ah ayaan u dooran lahaa mid ka mid ah kuwan.